Ohatrinona ny rakitra an-tranonkala ho fampiroboroboana ny mombamomba ny backlink?
Vao haingana, Google dia nanome antsika hafatra samihafa mifandraika amin'ny anjara asan'ny rindranasa ho an'ny tranonkala. Na dia izany aza, ny tahirin-drakitra miverimberina dia mijanona ho fitaovam-pizakan-tsindrim-peo famantarana ampiasaina hamantarana ny maha-zava-dehibe sy ny fahefan'ny pejy Internet.
Na dia misy adihevitra be dia be aza ny famerenana ny rindran-damba vaovao amin'ny tranokalanao, ny fanaraha-maso sy ny fanatsarana ny efa misy dia ny TSY MISY raha tianao ny hahitanao ireo mpanjifanao mety hahita ny tranokalanao amin'ny valin'ny fikarohana.
Ho ato amin'ity lahatsoratra ity dia hahita fomba mahazatra ianao amin'ny fampifangaroana ny angon-drakitra sy ny angona rakitra ao amin'ny pejin'ny tranonkala.
Ampidiro ao amin'ny mozika ny
data momba anao. Mba hijerena ny rohy momba ny rohy ao amin'ny tranonkala ao amin'ny TOP, dia mila manara-maso ny rakitsary sy ny tranonkala amin'ny tranonkala ianao ary mampifandray izany amin'ny angon-drakitra. Raha te handray soa avy amin'io rakitra io ianao, dia mila mandefa ny pejinao miaraka amin'ny rakitra rohy avy amin'ny fitaovana fanaraha-mason'ny rohy. Raha toa ka manondrana rindranasa rohy avy any Semalt, MOZ, Ahrefs na fitaovana malaza hafa ianao, mila manavao ny CSV ianao ao anatin'ny dingan'ny famoahana.
Raha vantany vao nahavita fitsapana ianao dia afaka manatanteraka ny isan'ireo tatitra izay hampivelatra ny angon-drakitrao amin'ny alàlan'ny fanolorana hevitra momba ny pejin-tranonkalanao. Afaka mandray soa koa ianao amin'ny fampidiranao ny angona Google Analytics sy Search Console ao amin'ny fikarohana anao mba handinihanao ny sandan'ny pejinanao miaraka amin'ny backlinks amin'ny fanamarinana raha toa ka mitaona ny fahatsapana ao amin'ny tranonkalanao ny pejy misy anao.
Fomba fampifangaroana rakitsoratra sy famandrihana
Mba hahitana raha ny tranokalanao dia tapaka ny rohy, azonao ampiasaina ny Semalt Web Analyzer na ny Tools DeepCrawler. Mila mahafantatra izay pejy tsy misy intsony ianao mba tsy hialana amin'ny rohy mankany amin'ny pejy tapaka. Ho very ny saka fifandraisana azo avy amin'ny rohy tapaka. Ny rohy rava dia mety hisy fiantraikany ratsy eo amin'ny zavatra niainan'ny mpitsidika anao amin'ny tranonkalanao toy ny hoe hipetraka amin'ny pejy simba fa tsy ireo izay mitady azy. Ho vokany, Google dia hampidina ny toerana misy anao.
Mba hanatsarana ity toe-javatra ity dia mila mamerina mamerina pejy tsy tapaka amin'ny status 200 ianao na mametraka mpitantana 301 azy ireo mba hitari-dalana ny mpampiasa amin'ny pejy hafa.
Pejy tsy misy pejy
Ireo pejy tsy misy endriny dia ireo izay manana endri-tsoratra tsy misy dikany na sehatra iray manondro pejy hafa. Mila mitady sy manafoana ireo pejy ireo ianao rehefa mamerina valiny 200, fa tsy azo hodinihina. Ny pejy toy izany dia mety hitondra anao ho sarobidy na hitarika ny fialan-tsasatra.
Mila manapa-kevitra ianao raha te hahita ilay pejy azo tsidihana amin'ny milina fikarohana na tsia. Raha te-hahazo ny fifamoivoizanao amin'ny tranokalanao ianao, dia mila fantarinao hoe maninona io pejy io dia tsy azo hodinihina ary manitsy azy io. Azonao atao ny manala na tsy manisy endritsoratra index na manolo izany amin'ny fanamarihana manokana ny kanônika.
Raha tsy tianao ny hanohanana an'ity pejy ity amin'ny botsikao finday, azonao atao ny manatratra ny sehatra mifandraika aminy ary angataho izy ireo hanolo ny rohy mankany amin'ny pejy hafa misy anao ao amin'ny tranonkalanao Source .